ỤKỌCHUKWU EDINAALA NWODIBO YA NWANYỊ DỊ AFỌ IRI N’ABỤỌ N’IKÉ NA KRỌS RIVA STEETI – hoo!haa!!
ỤKỌCHUKWU EDINAALA NWODIBO YA NWANYỊ DỊ AFỌ IRI N’ABỤỌ N’IKÉ NA KRỌS RIVA STEETI
Ndi ọrụ uwe ojii anwụchiela otu nwoke di afọ iri anọ na asatọ aha ya bụ Dominic John ma bụrụkwa onye isi ụka akpọrọ pastọ. Nwokea ka ana-ekwu na-owakporo ma dina nwa odibo ya nwanyị di nanị afọ iri na abụọ ma bụrụkwa onye amara dika Eno.
Onye ji ọkwa kọmishọna nka ndi uwe ojii na steeti ahụ bụ mazị Hafiz Inuwa bụ onye gbara ama okwua mgbe ana-egosi ndi amakekwu di iri asaa na asatọ n’ọnụ ọgụgụ, siri na nwokea akpọrọ Jọhn mebiri nwa odibo ya nwanyịa.
Mazị Inuwa sịrị na John bi na Ikot-Ekpo, di na Kalaba ekwerela n’eziokwu, na yabụ nwa nkịta tara yabụ akpụkpọ anyawara ya n’olu.
Ọ sịrị na ka ọnwa atọ n’afọa dị n’abalị iri n’otu, n’ihe dịka elekere iri nke mgbede ka-anwụchiri nwamadịa bụ John maka imebi nwa odibo ya nwanyị di afọ iri n’abụọ ka nwanyịa tiri mkpu. Okwukwara na John sịrị éé, na nkea bụrụ ọgwụ na oreela, n’ ihi na ya mere ihe ana ebo ya.
Onye isi ndi uwe ojiia siri na onye mara ihe ekwe na-akụ maka ahụ ike elelela ahụ nwatakịrịa were mara ka eke si anya anwụ maka ahụ ike nwataa. Ọ sịrị na-aga akpụpụrịrị nwokea bụ John ụlọ ikpe.
N’otu aka ahụ, ndi uwe ojii egosikwala nwoke dị afọ iri abụọ n’ise maka na ana-enyo ya enyo dika onye mebiri nwatakịrị nwanyị dị afọ itolu. Aha nwokea bụ Michael Okon. Ekwuru na Michael kpụbara obere nwa nwanyịa n’ ụlọ obibi ya bụ ebe ọ nọrọ taa mkpụrụ osisia asị sị atakwana.
Previous Post: NDI OMEBE IWU EKWENYEGHỊ NA AKA ONYE ISI ALA BINYERE MAKA ỊTỤ NGWA AGHA
Next Post: ỤLỌ